Godina Arsii Lixaa, Oromiyaa
Godina Arsii Lixaa keessa ka jiran magaalaalee lama dabalatee aanoota 15 keessatti hiriira gaggeeffamee tureen wal qabatee walitti bu’iinsi dhaqqabe iddoo 3 qofatti ta’uu bulchaa godinaa kan ta’an Obbo Dastaa Nageessoo ibsanii jiru.
Iddoon saden kun magaalaa Arsii Nagallee, Kofalee fi Dodolaa ta’uuu ibsan. Arsii Nagallee keessatti namni tokko Kofalee keessatti namni 2 du’u ibsanii magaalaa Dodolaa keessatti lubbuun namaa darbuu bira taree qabeenyaan gubachuu ibsan. Iddoo sadeentti waldaan Kristaanaas ta’e Masjiidi gubate gonkumaa hin jiru jedhanii kanneen lubbuu keenyaaf sodaanna jedhan dheessanii waldaa kristaanaa magaalaa Dodolaa tokko keessa buufatanii akka jiran dubbatan.
Isaaniif gargaarsa gochuuf tattaafiin godhamaa jiraachu akasumas abbootii amantii, maanguddootaa fi jiraattoota giddutti mariin amma gaggeeffamaa jiraachuu fi wal hubannaa irra ga’amaa akka jiru ibsan bulchaan godinaa Arsii Lixaa Obbo Dastaa Nageessoo.
Gama kaaniin Hospitaala walii-galaa Dodolaaf Meedikal Daayrekteera kan ta’an Dr. Tolaa Biyoo Tufaa akka jedhantti yeroo walitti bu’iinsi uumamee ture sanatti namoonni 56 gara hospitaalaa fidaman jedhanii hundi isaanii madaa’anii ta’uu ibsan.
Isaan kana keessaa 20 kan ta’an rasaasaan kan rukutaman warri hafan ulee fi dhagaan kan midhamanii dhiigaa turan ta’uu ibsan. Warra kana keessaa yaalii sadarkaa olaanaaf gara Hospitaala Shaashamannee fi Hawaasaatti kan ergaman 4 ta’uu ibsan. Kanneen ergaman kana keessaa 3 akkasumas kanneen hospitaala Dodolaa seenan keessaa namni 5 waluumaagalatti nami 8 lubbuun darbuu Dr. Tolaan hubachisanii jiru.